Muujinta cadowga rumaysadka
INTUUNAN Ilaahay Yehowah weli dhulka abuurin buu samada malaaʼig ku abuuray. Waqti waqti ka mid ah buu malag bilaabay inuu damco cibaadaduu Ilaahay keliya xaq u leeyahay. Markuu damacaa ku dhaqaaqay wuxuu doortay inuu Shayddaan noqdo, kaas oo ah mid Ilaahay ka soo hor jeestay. Shayddaanku sidee buu Ilaahay uga soo hor jeedsaday?
Shayddaanku mas buu isticmaalay siduu Xaawa u khiyaameeyo
Shayddaanku Xaawa buu khiyaameeyay siday Ilaahay u dhegeysanin. Wuxuu ka dhaadhiciyay inuu Ilaahay Yehowah wax fiican la doonayn markuu ka mamnuucay inay geedkii wax ka cunto. Si indha adayg iyo xishood laʼaan ah buu Ilaahay ugu yeeray beenaale wuxuuna Xaawa ka dhaadhiciyay inay diiddo hoggaaminta Ilaahay oo wuxuu ku yiri: “Ilaah wuxuu og yahay in maalinta aad cuntaan ay indhihiinnu furmi doonaan, oo aad noqon doontaan sida Ilaah oo kale, idinkoo kala garanaya wanaagga iyo xumaanta.” (Bilowgii 3:5) Xaawa si nacasnimo ah bay beentii Shayddaanka rumaysatay. Xukunkii Ilaahay bay jebisay oo Aadan bay goʼaankiisa beddeshay siduu u raaco. Ilaa waagaas Shayddaanku cadow buu ku yahay kuwa aamminka runta ah haysta. Oo weliba ilaa hadda buu dadka sii khiyaameeyaa. Sidee?
Iimaan kharriban baa faafismay
Caabudaadda sanam iyo waxyaalo kale iyo caado binuʼaadanku ku dhaqmaan buu Shayddaanku isticmaalay siduu dadka u lumiyo
Shayddaanku wuxuu isticmaalay sanam caabudaad iyo caado binuʼaadanku ku dhaqmaan siduu iimaanka reer binu Israaʼiil u qurmiyo. Ciise Masiix wuxuu ku yiri kuwa diinta hoggaamiya oo “dadka wax ku baraya amarrada dadka,” caabudaaddoodu micne ma laha. (Matayos 15:9) Markay qarankaas Masiixa diideen, Ilaahayna iyaga wuu diiday. Ciise wuxuu ku yiri: “Boqortooyada Ilaah waa laydinka qaadi doonaa, oo waxaa la siin doonaa dad midhihii boqortooyada bixiya.” (Matayos 21:43) Kuwii Ciise raacay waxay noqdeen dadkii uu Ilaahay u roonaaday.
Kaddibna Shayddaanku wuxuu rabay inuu dulleeyo kuwii Ciise raacay. Miyuu ku guul gaaray? Ciise si masaal ah buu u sii sheegay waxa dhici doona. Wuxuu yiri nin baa sarreen fiican dhul ku beeray. Mar kaloo dambe, nin cadow ah baa gocondho ku dhex beeray sarreenkii. Labaduba way isla baxeen ilaa beergooyska. Markaas baa la kala soocay sarreenkii iyo gocondhadii, gocondhadii baa la burburiyay. Laakiinse sarreenkii baa lagu soo ururiyay bakhaarka qofkii lahaa.
Markaas buu Ciise xertiisa u caddeeyay waxay ulajeeddada masaladu tahay. Isaga inuu yahay Beerreyga. “Abuurka wanaagsanna waa wiilasha boqortooyada, gocondhadiina waa wiilasha kan sharka leh. Oo cadowga abuurayna waa Ibliiska, beergooyskuna waa dhammaadka wakhtigii dunida, kuwa gooyaana waa malaaʼigo.” (Matayos 13:38, 39) Ciise wuxuu yiri xertiisa runta ahayd waa sarreenkii oo kale. Laakiinse Shayddaanku wuxuu ka dhex beeray kuwii Ciise si daacad ah u raacay xer been ah oo gocondho la mid ah. Siduu Ciise isagu inoo sii sheegay, qarniyadii ku xigay dhimashadiisii waxaa soo baxay xer been ah. Kuwaasi horey bay u sii wadeen tababbarid ka soo hor jeeda runta oo waxa ka mid ah barista Ilaah oo saddex ah. Xertii beenta ahayd waxay bilaabeen inay sanamyo iyo waxyaalo kale caabudaan oo ay ka qaybqaataan arrimaha siyaasadda waddammada ku saabsan. Laakiinse xer yar baa Ciise tacliintiisii si daacad ah ugu hadhay.
Iimaan run ah waa la badbaadiyay
Ciise wuxuu fasiray aakhiran inuu isbeddel dhici doono. Ilaahay malaaʼigtiisa baa sooci doonta kuwa iimaanka runta ah aan qabin in la baabbiʼiyo. Markaana kuwa iimaanka runta ah haystana si dhib yar baa loo garan doonaa. Ugu dambeyntii Shayddaanka Ibliiska ah oo ah iimaanka runta ah cadowgiisii ugu horreeyay, waa la baabbiʼin doonaa. Haa, iimaan run ah baa guuleysan doona!
Sidee baa maanta loo ogaan karaa kuwa iimaan run ah haysta? Mar dambe baynu ka wadahadli doonnaa jawaabta suʼaashan.
Malaaʼigta Ilaahay waxay doondoonaan dadka raba iimaan run ah
Halkee buu Shayddaanku ka yimid?
Sidee buu Shayddaanku iskugu dayay inuu iimaanka kharribo?
Micnee tusaalada Ciise oo ku saabsan sarreenka iyo gocondhada.
Wadaag Wadaag Muujinta Cadowga Rumaysadka